भेरी अस्पतालमा डायलाइसिस सेवा विस्तार – Satyapati
भेरी अस्पतालमा डायलाइसिस सेवा विस्तार
बाँके । सबैको ध्यान कोभिड–१९ तर्फ मात्रै केन्द्रित भएका बेला अन्य जटिल रोगका बिरामीका लागि पनि भेरी अस्पतालले विभिन्न सेवा विस्तार गरेर उपचार प्रदान गरिरहेको छ । सो क्रममा मिर्गौला रोगबाट ग्रसित बिरामीको उपचारमा समस्या आएपछि अस्पतालले दुई मेसिन थपेर डायलाइसिस सेवा विस्तार गरेको छ ।
अस्पतालका प्रमुख डा.प्रकाशबहादुर थापाले अहिलेसम्म दुईवटा मेसिनबाट डायलाइसिस हुँदै आएकोमा मिर्गौलाका बिरामीको उपचारमा समस्या बढेपछि दुईवटा मेसिन थप गरेर उपचारलाई सहज बनाइएको बताए । अस्पतालका डायलाइसिस युनिट इन्चार्ज तथा फिजिसियन डा.पारस श्रेष्ठले अब चारवटा मेसिनको माध्यमबाट बिरामीलाई नियमित सेवा दिन थालिएकाले उपचारमा सहज भएको बताए
उनले चार मेसिनमध्ये एउटा मेसिनलाई कोरोना सङ्क्रमित मिर्गौला रोगीका लागि प्रयोग गरिएको बताए । डा. श्रेष्ठका अनुसार उक्त युनिटमा यसअघि चारवटा डायलाइसिस मेसिन थिए । केही समयको प्रयोगपछि दुईवटा मेसिन बिग्रिएका थिए । बिग्रिएका मेसिन बन्न नसक्ने भएपछि अस्पतालले मेसिन थपेर सेवा विस्तार गरेको हो ।
दुईवटा मेसिन थपिएपछि अहिलेको तुलनामा दोब्बर बिरामीले सहजरूपमा उपचार पाउन थालेको अस्पतालले जनाएको छ । हालसम्म हप्तामा १२ जना मिर्गौलाका बिरामीले नियमित डायलाइसिस सेवा लिइरहेका थिए भने मेसिन थप गरिएपछि अहिले आएर २४ जनाले सेवा लिइरहेका छन् ।
यसअघि मिर्गौला सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरू भेरी अस्पतालमा पालो नपाएर निजी अस्पतालमा महँगो रकम तिरेर उपचार र डायलाइसिस गर्न बाध्य थिए । तर अब त्यस्तो बाध्यता समाप्त भएको र बढीभन्दा बढीले न्युनतम शुल्कमा उपचार पाउन थालेको डा.श्रेष्ठले बताए । डायलाइसिस युनिटमा दरबन्दी अनुसार चिकित्सक र कर्मचारी नरहेकाले माग गरिएको जनाउँदै छिटै माग सम्बोधन हुने विश्वास अस्पताल प्रमुख डा. थापाले व्यक्त गरे ।